Freddy's Nightmares Iye zvino Akasununguka Kutepfenyura ese Episodhi makumi mana nemana
musha	Horror Varaidzo Nhau	Freddy's Nightmares Iye zvino Akasununguka Kutepfenyura ese Episodhi makumi mana nemana
Zvimwe Freddy Zvese Zviripo Zvino
by Trey Hilburn III Dai 4, 2022
by Trey Hilburn III Dai 4, 2022 62,477 maonero
Kurota kwaFreddy yakanga yakaoma kuwana kwenguva yakanaka. Iwo anthology akatevedzana - ese akaiswa akatenderedza Freddy Krueger uye Nightmare PaElm Street zvaingonetsa kuwana zvachose. Kunyanya nemhando ipi neipi yakanaka. Iyo showa yakaratidza kumashure muna 1988 yaive chiitiko TV yehorror hounds. Nhevedzano dzakatanga netariro zvikuru. Izvo chaizvo zvakatanga kutenderera zvakatenderedza Freddy iye uye yakatotungamirwa na Texas Chainsaw Massacre mutungamiriri, Tobe Hooper kuti atange. Nhau dzakanaka, y'all now the whole series is available for streaming.
Kwechinguva, iyo inotyisa kwazvo El Rey chiteshi yaive nekodzero kune yese nhevedzano. Asi, zvinosuruvarisa kuti El Rey haasisina isu. Saka, vateveri veFreddy vaitarisira kuti tichawana remastered edition pa disc. Asi, izvozvo hazvina kuitika. Zvikasadaro. Saka, ichi chinotevera chakanakisa uye chemahara chinhu.
Chikamu chekutanga (No More Mr. Nice Guy) chenhevedzano chakagadzwa chakatenderedza Krueger uye kutongwa kwake. Isu tese tinoziva kuti Fred akasunungurwa pahunyanzvi uye akazosangana neakazara simba revabereki vaElm Street.
The pilot episode haina hafu yakaipa. Ndichiri kuyeuka tichitarisa mune ino ine huwandu hukuru hwekunakidzwa kwatakanga tine nhevedzano yese nezve Krueger. Zvinosuruvarisa, iyo nhepfenyuro inoguma ichienda kure kure. Zvinonzi ndezvekurota chaiko kwaFreddy. Asi, idzi nyaya pfupi hadzina kunzwa sekunge dzaive chikamu chenyika yeKreuger.
Zvese zvataurwa, zvichiri kunakidza kuona uye chikamu chinonakidza chenhoroondo inotyisa sese. Iyo chokwadi chekuti yakazviita kusvika ku44 episodhi zvakare inoshamisa.
Kune akati wandei episodhi emhando yekunyura kumashure muFreddy lore asi kune chikamu chikuru ingano dzisina hukama.
Enda kuTUBI kuti utange kunyura kwako muFreddy's Nightmares izvozvi!